9 khuraafaad SEO ah oo caadi ah oo aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso | BehMaster
Bogga ugu weyn/Content Suuq/9 khuraafaad SEO ah oo caadi ah oo aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso
9 khuraafaad SEO ah oo caadi ah oo aad u baahan tahay inaad iska ilaaliso
Marka ay timaado habka ugu wanaagsan ee loo sameeyo Search Engine Optimization (SEO) maalmahan, waxaa jira macluumaad badan oo halkaas ka jira.
Dhibka kaliya ayaa ah, ma wada saxna. Khuraafaadka SEO ayaa badan, iyo la socoshada waxa shaqeeya iyo waxa aan shaqayn waxay noqon kartaa caqabad.
Laakiin waa muhiim inaadan niyad jabin!
Ka dib oo dhan, dhammaystirka xirfadahaaga SEO ayaa fure u ah kordhinta muuqaalka, taasoo kuu sahlaysa inaad hesho macaamiisha suurtagalka ah ee raadinaya waxaad bixiso.
SEO waxa kale oo ay ku caawisaa in ay kordhiso tirada taraafikada aqoonta leh ee ku imanaysa jidkaaga iyo adiga iyo mareegahaaga meelaynta maamul ahaan.
Waa xeelad qiimo leh oo waxaad u baahan tahay macluumaadka saxda ah si aad u sameyso.
Taasi waa sababta been-abuurka ugu weyn ee khuraafaadka SEO kaa caawin kara inaad horay u socoto, kor u kaca heerarka iyo kordhinta heerarka beddelka.
Waa kuwan waxa aan ku dabooli doonno qoraalkan blog:
Khuraafaadka SEO #1: Cufnaanta Erayga Muhiimka ah ee Sare waxay hagaajin doontaa Qiimaynta Bogga
Iyadoo laga yaabo inaad haysato dhowr kelmadood oo muhiim ah oo aad rabto inaad ku darajeyso, makiinadaha raadinta kuma abaalmarin doonaan inaad aragto inta jeer ee aad ku dari karto macluumaadkaaga.
Ku soo ururinta boggaaga mareegaha isla ereyada muhiimka ah ee marar badan waxaa loo tixraacaa sida walxaha muhiimka ah, taas oo dhab ahaantii u horseedi karta ciqaabo raadinta.
Kelmado muhiim ah oo si wanaagsan loo baadhay oo si wanaagsan loo meeleeyay ayaa badalkeeda ka shaqayn kara yaabab. Algorithms-yada raadinta ayaa si fudud kuwan u heli doona.
Xaaladdan oo kale, cilmi-baarista ereyada muhiimka ahi waxay sii ahaanaysaa mid lama huraan u ah qorshahaaga suuq-geynta nuxurka iyo istaraatiijiyada suuqgeynta dhijitaalka ah.
Ogaanshaha waxa isticmaalayaashu ay ka raadinayaan safarka iibsadaha iyo erayada gaarka ah ama weedhaha ay isticmaalaan inta badan adiga ayaa faa'iido kuu leh.
Si ay ereyada muhiimka ah u noqdaan kuwa ugu waxtarka badan, hel kuwa ku xidha macaamiishaada oo u kaxeeya taraafikada goobtaada.
Khuraafaadka SEO #2: Tirada isku xidhka ayaa ka muhiimsan tayada
Iyadoo lahaanshaha xiriirin badan ay u ekaan karto istaraatiijiyad SEO ah oo wanaagsan, taasi hadda maahan.
Dhab ahaantii, xiriirin aad u badan oo tayadoodu hooseyso ayaa laga yaabaa inay hoos kuu jiidaan oo ay khatar geliyaan kalsoonidaada.
Xidhiidhada badan ee shabakadaha kale, macaamiishaadu way daali karaan. Soo-booqdayaasha mareegaha ayaa maalmahan ka caqli badan waxaana laga yaabaa inay ku dhimaan gabi ahaan haddii ay arkaan inaad bixinayso xiriirin xad-dhaaf ah.
Taa baddalkeeda, hoos u dhig tirada isku-xiryadaada oo aad xoogga u saartid tayada.
Habkani wuxuu kaa caawin doonaa inaad ka faa'iidaysato waxa faa'iido u leh macaamiishaada, dhismaha maamulka habka.
Ku xidhida boggaga sumcadda sare leh ee aad ku kalsoon tahay iyo in daawadayaashu ay aamini karaan waa jihada wanaagsan ee la raaco.
Khuraafaadka SEO #3: Nooca isku xidhka waxba ma aha
Inaad ku fikirto in nooca isku xirka aysan waxba ahayn waa khuraafaad aadan awoodin inaad ku dhacdo maalmahan.
Mid ka mid ah yoolalka muhiimka ah ee SEO waa in la dhiso maamulka, abuurista kalsoonida macaamiisha suurtagalka ah, taas oo horseedi karta heerka beddelka sare.
Hal dariiqo oo aad tan ku sameyso waa nooca xiriiriyeyaasha aad wadaagto.
Qofka iibsadaha ah ayaa ku eegaya inaad bixiso macluumaad faa'iido leh. Haddii aad ku xidho goobo aan khusayn ama aan la aamini karin, waxa laga yaabaa inay ogaadaan inaad wakhtigooda luminayso ama ay suurtogal tahay inay ixtiraamaan iyaga.
Halkii aad ku xidhi lahayd bogag iyo bogag kala duwan, samee cilmi-baadhista waxa ugu wanaagsan in lagu xidho oo hel kalsoonida daawadayaasha iyo macaamiisha.
Ku dar isku xirka gudaha iyo dibaddaba, kana fogow istiraatijiyad isku xidhka random.
Hadafyadu waa in lagu daro qiimaha goobtaada, ku dar qiimaha macaamiishaada suurtagalka ah, oo aad ilaaliso daacadnimada macaamiishaas aad hore u leedahay.
Nooca isku xirka aad ku dhisto macluumaadkaaga ayaa ka turjumi doona awoodaada iyo arrinta daawadayaasha.
Markaad aragto inaad ku xidhayso boggaga la aamini karo oo keliya waxay kuu xaqiijinaysaa inaad ogtahay waxaad samaynayso.
Khuraafaadka SEO #4: Isku xidhka Dhismuhu kuma xidhna SEO
Fikirka dhismaha isku xirka maaha mid ku habboon SEO wuxuu u horseedi karaa guul hoose si loo gaaro darajooyin sare iyo helitaanka taraafikada.
Matoorada raadinta waxay fahmeen in isku xidhka kala sareynta dhismaha ay ka dhacaan nuxurka.
Nidaam kasta oo iskuxiran oo khaldan ayaa laga yaabaa inuu keeno mashiinka raadinta inuu ku guuldareysto inuu gurguurto oo u tilmaamo goobtaada si sax ah. Dhanka kale, tani waxay saameyn kartaa qiimeyntaada.
Taa baddalkeeda, waqti ku bixi horumarinta istaraatiijiyaddaada isku xirka.
Maskaxda u yeelo si aad dadka kale ugu hesho dariiqooyin ay dib ugu xidhaan goobtaada, dhisidda kalsoonidaada iyo awooddaada.
Tusaalooyinka sida tan loo sameeyo waxaa ka mid ah abuurista xog-waraysiyo kuwa kale waxay rabaan inay wadaagaan ama xusaan boostada blog-ka ama dhacdada saameyn-ahaye.
Fahamka qiimaha dhismaha isku xirka ayaa lagama maarmaan u ah istaraatiijiyada SEO ee guuleysta maanta.
Khuraafaadka SEO #5: SEO waa shaqo hal mar ah
Hal dhalanteed oo badan ayaa laga yaabaa inay ku saabsan SEO waa marka aad meel dhigto, waad dhammaatay oo waad iska fadhiisan kartaa oo daawataa natiijooyinka soo galaya.
SEO ma aha mid go'an oo iska ilow hal mar shaqo.
Taa beddelkeeda, waa hawl si joogto ah u kobcaysa oo ay tahay in la kormeero, la tijaabiyo, la lafo-guro, oo wax laga beddelo marka aad sii socoto.
Ku-joogista wax kasta oo jira iyo inaadan ku shaqaynayn istaraatijiyaddaada Suuqgeynta Dijital ah waa hab faa'iido leh oo aad kaga horreyso tartankaaga.
Isbeddelka istiraatiijiyaddaada SEO si ay ugu habboonaato baahiyahaaga oo aad u gaarto macaamiisha mustaqbalka waa geedi socod joogto ah.
Matoorada raadinta waxay sii ahaanayaan qarsoodi guud ahaan, markaa dadaal ayaa loo baahan yahay si loo helo waxa kaa dhigi doona mid muuqda.
Qorshayso inaad geliso wakhti iyo agab si aad macluumaadkaaga uga dhigto mid cusub, isku xidhkaagu khuseeyo, oo tartamayaashaadu meesha ka saaraan.
Khuraafaadka SEO #6: Xawaaraha Boggu Muhiim maaha
Soo-booqdayaasha mareegahaaga waxay rabaan inay si degdeg ah wax walba u helaan.
Marka boggu si tartiib tartiib ah u soo baxo, waxay si degdeg ah u lumin karaan xiisaha oo way dhaqaaqi karaan, iyaga oo meesha ka saaraya khuraafaadka ah in xawaaraha boggu aanu muhiim ahayn.
Ma aha oo keliya xawaaraha bogga muhiim u ah booqdayaasha degelkaaga, laakiin sidoo kale waxay lama huraan u tahay darajadaada matoorada raadinta.
Tani waxay ka dhigaysa kordhinta xawaaraha bogga qayb lagama maarmaan ah oo ka mid ah istaraatiijiyada SEO.
Daawadeyaasha ayaa kuu fududayn doona ka dibna wakhti badan ku qaadan doona boggaaga internetka, taas oo keeni karta in qiimaha beddelka uu sareeyo.
Khuraafaadka SEO #7: SEO waa mid aad qaali u ah
Qalabka suuq-geynta dhijitaalka ah ee kala duwan iyo ikhtiyaarrada maanta jira ayaa gacan ka geysta in la beeniyo khuraafaadka ah in SEO aad qaali u yahay.
Ka sokow, qaali waa erey qaraabo ah, taas oo ku xidhan xajmiga iyo hantida shirkaddaada.
Ganacsi yar iyo mid dhexdhexaad ah ayaa laga yaabaa inuu leeyahay miisaaniyad suuq-geyn yar oo ka weyn midka weyn, laakiin weli waxaa jira hab kharash-ku-ool ah oo lagu gaaro heerka saxda ah ee SEO ee qof kasta.
Maanta xirmo SEO ah ayaa loo habeyn karaa si ay ugu habboonaato baahiyahaaga gaarka ah iyo waxa aad rabto inaad gaadho.
Waad dooran kartaa oo dooran kartaa alaabta iyo adeegyada aad u baahan tahay ka dibna ku dar marka loo baahdo.
Khuraafaadka SEO #8: Waxaa Jira Hal Dariiqo Oo Kaliya Oo Lagu Dhaqan Karo SEO
Marka dad badani ka fikiraan SEO, waxay u maleynayaan inay ku lug leedahay tallaabooyin adag oo ay tahay in la qaado si loo gaaro guusha.
Tani waa khuraafaad SEO ah.
Xaqiiqda dhabta ah ayaa ah in ay jiraan siyaabo badan oo lagu hirgeliyo istaraatiijiyada SEO ee guuleysta. Waxa aad u baahan tahay oo kaliya in aad aqoonsato kuwa adiga kugu habboon.
Iska ilaali xaddididda fursadahaaga marka ay timaado SEO. Baadh waxa aad samayn karto si aad u soo jiidato dhagaystayaasha aad beegsanayso oo aad u hesho muuqaal sare.
Hagaajinta tayada nuxurka, kala-duwanaanta noocyada macluumaadkaaga, ka faa'iidaysiga dhisidda isku xidhka, iyo baadhista ereyada muhiimka ah ee ugu wanaagsan ayaa ah dhawr ka mid ah siyaabaha aad u kala saari karto istaraatiijiyadaada SEO.
Khuraafaadka SEO #9: Waxyaabaha Dhexdhexaadka ah Ma Horumariyo SEO
Nuxurku waa arrimo, iyo marka ay timaaddo abuurista khibrad booqde oo ka wanaagsan, nooca nuxurka ayaa waliba muhiim ah.
In ka badan iyo in ka badan, waxaan aragnaa nuxurka isdhexgalka oo ku guulaysta booqdayaasha oo horumarinaya SEO.
Mawduuca is-dhexgalku wuxuu kordhiyaa ka-qaybgalka iyo wakhtiga ay booqdayaashu ku qaataan mareegahaaga.
Natiijada tooska ah ee tan, makiinadaha raadinta waxay qaataan ogeysiis, tani waxay faa'iido u yeelan kartaa qiimeyntaada.
Laga soo bilaabo macluumaadka is-dhexgalka ilaa fiidiyowyada is-dhexgalka, waxaad haysataa dhowr siyaabood oo aad ku geli karto booqdayaal badan oo boggaaga ah oo aad u horumariso SEO-gaaga.
Waxyaalaha is-dhexgalka leh, waxaad naftaada ka dhigtaa mid aad u xasuusan isticmaalayaasha. Waxaad sidoo kale ku sasabaysaa kuwa kale inay ku xidhaan macluumaadkaaga, kordhinta taraafikada goobtaada.
Isku soo wada duuboo: Debunk Khuraafaadkan SEO Hal mar iyo Dhammaan
Istaraatiijiyadaada SEO waxay lama huraan u tahay gaaritaanka yoolalka mustaqbalka dhow iyo kuwa fog labadaba.
Ogaanshaha waxa shaqeeya iyo waxa khuraafaad ah waxay kaa qaadi kartaa waddo dheer si aad u horumariso darajooyinkaaga iyo helitaanka macaamiil badan.
Oo haddii aad rabto inaad sii waddo balaadhinta aqoontaada ku saabsan Hagaajinta Mashiinka Raadinta, halkan waa talo fiican.
Waxaan leenahay hage dhameystiran gaaritaanka natiijooyinka ugu sarreeya Google! Soo dajistuna waa bilaash.
Twitterku waxa uu ku daray habka wada shaqaynta ee Boosyada
Samsung One UI Watch Taariikhda Siideynta (WearOS 3.0 Tracker Cusbooneysii)